अचम्म दुनिया Archives - Page2of 13 - Suchana Daily
विश्वमा एउटा यस्तो देश छ जुन दुई पिल्लरमा टिकेको छ भन्ने सुन्दा तपाइलाई कस्तो लाग्छ रु सुन्दा होइन जस्तो लागेपनि यो वास्तविकता हो । इंग्ल्याण्डको साफोल्स समुन्द्री तटबाट १० किलोमिटर टाढा रहेको सील्याण्ड माइक्रो नेसनका नामले पनि चिनिन्छ । सील्याण्डको जनसंख्या मात्र २७ छ । सुन्दा अचम्म लाग्छ तर यो सत्य.....
छोरी हराएको २४ वर्षपछि फेला पर्दा बाबुआमा कति खुशी होलान् ? चीनका एक बाबुले आफ्नी छोरी हराएको २४ वर्षपछि फेला पारेपछि खुशीले रोएका छन् । चार वर्षकी छोरी हराएका ती बाबुले अन्ततः दुई सन्तानकी आमा बनिसकेकी छोरी फेला पारेपछि निकै भावुक भए । सन् १९९४ मा वाङ मिङचिङ नामक व्यक्ति र उनकी पत्नी लिउ देङयिङ चेङ्दुको.....
जुम्ल्याहा दिदीबहिनीहरु सबै काम एकसाथ गर्छन् । उनीहरुको शरीर दुईवटा छ तर बाँकी सबै कुरा एउटै जस्तो छ । उनीहरु सबै काम एकसाथ गर्ने मात्रै होइन उनीहरुको ब्वाइफ्रेण्ड पनि एउटै छन् । यी दिदीबहिनीहरु केही समय अगाडि टिएलसी एक्ट्रीम सिस्टर्स नामको टेलिभिजन शोमा देखिएका थिए । एना र लुसी डिसिंक नामका यी दिदीबहिनीको.....
तपाईंलाई अचम्मका लाग्ला कि एउटा जनजाती यस्तो पनि छ जहाँका ६–७ बर्ष उमेरका बालबच्चाले स म्भोग ग’र्न थाल्छन् । पपुआ न्यू गिनीमा बस्ने ट्रोबियान्ड जनजातीको समूदायमा यस्तो प्रचलन छ । यतिमात्र होइन, ११–१२ वर्ष भएपछि यहाँका बच्चाहरुको विवाह पनि भइसक्छ । अझ अचम्मको कुरा के छ भने यहाँका बच्चाहरुलाई शा’रि’रि’क.....
बिहे सबैले गर्छन् तर बिहे-ब सबैले गर्दैनन्। आजकाल विवाह शब्दको पछाडि वाह हुँदैन। किनकि विवाहपछिको दिन वाह हुँदैन।हाम्रोमा बिहे दुई प्रकारले हुन्छ। मागी र भागी। भागी व्यक्तिगत अवस्थाहरूमा भर पर्छ। म मागीको कुरा गर्छु। सुरुमा कुरा चल्छ। कुरा चलाउने अधिकांश छिमेकी या आफन्त पेरिफेरीका मान्छे हुन्छन्।.....
महानायक राजेश हमाल उमेरले आधा शताब्दी नाघिसकेका छन् । विवाहको सवालमा सधैँ चर्चामा आएका महानायक हमालले उमेर ढल्किएपछि मधुसँग विवाह गरे । अहिले भने कहिले बच्चा पाउने भनेर उनलाई धेरैले प्रश्न तेर्साउने गरेका छन् । उमेरले आधा शताब्दी नाघिसक्दा पनि महानायक हमाल आफूलाई सधै जवान ठान्छन् । कसैले अहिलेको उमेर.....
माईत जान लाग्दा श्रीमतीले श्रीमानलाइ लेखेको एक मार्मीक चिठ्ठी …पढ्नुहोस
म अफिसमा थिए श्रीमतिजी को माइत जाने दिन थियो फोन गरेर भनिन ‘म माइत हिडे आफ्नो ख्याल गर्नु’ । जब साझ घर पुगे टिभिमा एउटा पर्ची चिप्काइएको थियो जस्मा लेखिएको थियो । १. साथिहरुलाइ घर बोलाएर घरलाइ कवाड खाना बनाउने काम नगर्नु अगिल्लो पल्ट ४ वटा खाली बोतल सोफाको मुनि सफा गर्दा भेटेको थिए । २. खाना सकेसम्म घरमै.....
नेपाली चलचित्रकी एउटा शुशिल अभिनेत्री हुन निता ढुंगाना । उनले अभिनय गरेको कतिपय चलचित्रहरुले राम्रो व्यापार गरे भने कतिपय चलचित्रले औसतमात्रामा पनि व्यापार गरेका छन । नायिका निता ढुंगाना अहिले आफ्नो रिलिज हुन लागेको चलचित्र को प्रचार प्रसारमा रहेको बेला आफुलाई विवाह गर्न हतार भएको बताएकी छिन् । निता.....
बाग्लुगं बुर्तिबागंका युवराज कँडेल र पुष्पा कँडेलको जोडीलाईं सहयोग प्राप्त भएको छ । यो संघर्षशिल जोडीलाई अमेरिकाबाट आएको सहयोग लिएर संचारकर्मी मोहन बस्नेत फेरी बाग्लुगं पुगेका छन् । विभिन्न ब्यक्तिबाट प्राप्त १२ हजार रुपैयाँ दिन मोहन बाग्लुगं पुग्दा युवराज र पुष्पाको जीवनका रोचक तथइ बाहिर आएका छन्.....
इन्दिरालाई उनका प्रेमीले २ बर्षदेखि मायामा वाचा गर्दै रिङ पनि लगाइदिएका छन् ।
गायिका इन्दिरा जोशीले केही समय अगाडि कुरा गर्दै आफू प्रेममा नरहेको र बिहेको बिषयमा नसोचेको बताएकी थिइन् । केही महिना अगाडि इन्दिराले प्रेममा नरहेको बताएपनि उनी २ बर्षदेखि प्रेममा रहेको खुलेको छ । इन्दिरा आफैले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै २ बर्षदेखि आफू प्रेममा रहेको खुलाएकी छिन् । इन्दिराले लेखेकी.....